बाढीले सारा खुशी लुटेको मेलम्ची पुग्दा कसका आँखा नरसाउलान् र ? यस्तो छ अवस्था,,,,,(भिडियोसहित) - Mitho Khabar
June 21, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on बाढीले सारा खुशी लुटेको मेलम्ची पुग्दा कसका आँखा नरसाउलान् र ? यस्तो छ अवस्था,,,,,(भिडियोसहित)
काठमाडौँ । देशभर को’रोना भा’इरस सं’क्रमणको दोश्रो अहिले बन्दाबन्दीको अवस्था छ। को’रोना भाइरसको संक्रमणभन्दा पनि बढि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची बा’सीलाई बाढी-पहिरोले सताएको छ । असार १ गते बाढी पहिरो आउनुभन्दा अगाडी उनीहरुसँग खान लाउनलाई केहि समस्या थिएन। तर, अहिले ती मेलम्चीका बासीहरुलाई कहाँ जाने के खाने भन्ने समस्याले सताएको छ ।
यस्तै नेपाल भारत मैत्री संघ झापा जिल्ला शाखाले झापा जिल्लाको भद्र नगरपालिका वडा नम्बर ९ र १० मा पनि को’रोनाबाट बिशेष प्रभावित घर धुरीलाई चिनी, चामल, तेल, नुहाउने साबुन, लुगा धुने साबुन, प्याड, जिरा, बेसार , नुन,दात माझ्ने ब्रस/मन्जन, मक्षड धुप, सर्जिकल मास्क, मे’डिकल सा’माग्रीहरु वितरण गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा केन्द्रिय अध्यक्ष ओमप्रकास सुबेदी, जिल्ला अध्यक्ष प्रदिप रेग्मी, जिल्ला सचिब गणेश पोख्रेल लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
बलिउड नायिकाले अर्धन’ग्न शरीरभरि माटो दलेपछि हं’गामा